प्रेम प्रस्ताव कसरी राख्ने
ramkrishna January 7, 2021	how to purposeप्रेम प्रस्ताव कसरी राख्ने
प्रेम प्रस्ताव कसरी राख्ने ? प्रेम भन्ने शब्द सुन्दा जति सुन्दर छ, त्यतिनै यसको भाव पनि गहिरो छ । प्रेम एउटा आफैमा अपूर्ण शब्द हो । जसले यो प्रेम शब्दलाई पुरा गर्न चाहन्छ, उसले पूर्ण बनाउन पनि सक्छ र सक्दैन पनि । त्यसैले गर्दा यो प्रेम शब्द अपूर्ण छ । आजकलका युवा युवतीहरु उमेरको चाहना र भावना अनुसार आत्मीय साथीको खोजीमा हुन्छन् । आत्मियता, साथित्व महसुस गर्दै प्रेमीसँग जीवन जिउने सबैको चाहना हुन्छ । प्रेम प्रस्तावका लागि एउटी केटीले केटा मात्रै नहेरेर अधिकांश युवतीहरु केटाहरुले प्रेम प्रस्तावका लागि अपनाउने तरिकावाट पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा केटाले व्यक्त गर्ने प्रेमका शब्दहरू मात्र पनि पूर्ण नहुन सक्छन् । प्रेम प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्नका लागि प्रस्ताव गर्दाको वातावरण पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफूलाई मन परेको व्यक्तिको मन जित्नका लागि महत्वपुर्ण टिप्सहरु यस प्रकार छन् :
ञ. हुन त सबैले खुलेरै प्रेम प्रस्ताव राख्छन् भन्ने छैन । कतिपय यो मामलामा हिम्मत जुटाउन सक्दैनन भने कतिपयले आफू अस्विकृत हुन्छु कि भन्ने डरले पनि भन्न सक्दैनन् । यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ ब्यानर प्रस्तावको उपायलाई अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै, कुनै सानो वा ठुलो ब्यानरमा ‘आई लभ यु’ लेखि उसको घर वा अफिस बाहिर प्रदर्शन गर्ने । तर, त्यो ब्यानरमा उसको नाम भने उल्लेख गर्नु उचित हुँदैन । यो उपाय तपाईँ रिजेक्ट हुनुहुन्न भन्ने भईसकेपछि मात्रै अपनाउनु राम्रो मानिन्छ ।
Previous Previous post: ट्रम्पलाई मनपर्छ ज्याक मा
Next Next post: सावधान ! शौचालयमा फोन चलाउँदा हुनसक्छ पाइल्स